? မုံရွာတွင် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို ယခုည မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဗုံး ၁၀ လုံးဆက်တိုက်ပေါက်၊ ဆောမြို့နယ်တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၅ ဦးကျ - Voice Of Burma
? မုံရွာတွင် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို ယခုည မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဗုံး ၁၀ လုံးဆက်တိုက်ပေါက်၊ ဆောမြို့နယ်တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၅ ဦးကျ
မုံရွာတွင် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို ယခုည မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဗုံး ၁၀ လုံးဆက်တိုက်ပေါက်၊ ဆောမြို့နယ်တိုက်ပွဲများကြောင့် စစ်ကောင်စီတပ်သား ၅ ဦးကျ
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို ပြည်သူများက ခုခံ တော်လှန်စစ်များ ဆင်နွှဲလျက်ရှိရာ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင်ခုခံစစ်များ ဆက်တိုက် လုပ် ဆောင် နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မုံရွာမြို့ (လယ်ဇင်မှ အရှေ့ စက်မှုဇုံအဝင်လမ်း) တွင် ယနေ့ ည ၉ နာရီ ဝန်းကျင် PDF – South Monywa နှင့် Monywa Heroes Group၊ Monywa Nightking တို့ ပူးပေါင်း၍ စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကို မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊
မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့် စစ်ကောင်စီယာဉ်တန်းကား၄စီးအနက် ၂ စီး မိုင်းထိ၍ စစ်ကားအောက်ပိုင်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုကိုလတ်တလောမသိရှိရသေးဟု ဒေသခံ ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးတပ်များက ပြည်သူသို့ အသိပေးထားသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးတပ်များက အင်္သခရာစစ်ဆင်ရေးအမည်ဖြင့် စစ်ကိုင်းမြို့ပေါ်ရှိ စစ်ကောင်စီတပ်များ၏ ပစ်မှတ်များကို ဗုံး ၉ လုံးဖြင့် ယနေ့ တိုက်ခိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စစ်ကိုင်းရှိ ရဲတပ်ရင်းအမှတ်၁၆ တွင် ယနေ့ နံနက် ၄ နာရီ ၃၅ မိနစ်အချိန် ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲကြောင်း၊ ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့နယ်စည်ပင်ရုံး ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်တရားရုံး ၊ ည ၇ နာရီ ၂၀ မိနစ်တွင် ရတနာပုံတံတား စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ Non-CDMများ၏ အိုးအိမ်တိုက်တန်း ၊ စစ်ကိုင်းမြို့မရဲစခန်းကို ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်လည်းကောင်း ၊
စစ်ကိုင်းရဲစခန်းအမှတ်၂ ကို ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်လည်းကောင်း ၊ ပဒူတိုက်နယ်ရဲကင်းစခန်းကို ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်လည်းကောင်း ၊ မင်းကွန်းတိုက်နယ်ရဲစခန်းကို ည ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်လည်းကောင်း ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ထွေအုပ်ရုံးကို ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင်လည်းကောင်း ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဆားတောင်မြို့ရဲစခန်း ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင်လည်းကောင်း ဗုံးများ ဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်း ၊ ပိုမို ပြင်းထန်သော ဖောက်ခွဲမှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်က ပြောသည်။
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ် အချိန် PDF-SAW၊ ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ နှင့် ဆောမြို့နယ်၊ ခူးချောင်းကျေးရွာမှ ထွက်ခွာလာသော စစ်ကောင်စီအင်အား ၁၀၀ ခန့် တို့ ခူးချောင်းရွာမြောက်ဘက် ဇရပ်နားအရောက်တွင် လက်နက်ကြီးများဖြင့် နှစ်ဘက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊
PDF- SAW ဘက်မှ လက်နက်ကြီးဖြင့် စတင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပီး ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ၏ မိုင်းများမိကာ စစ်ကောင်စီ ဘက်မှ ၅ ဦးထက်မနည်း ကျဆုံးနိုင်ပြီး ၁၀ ဦး ထက်မနည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုများ ရှိနိုင်ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲကြာမြင့်ချိန် ၄ နာရီ ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပီး PDF – SAW ဘက်မှ ရဲဘော် ၁ဦး ကျဆုံးကြောင်း PDF_SAW က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ဓာတ်ပုံ- ရန်ကုန်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကင်းလှည့်နေသည့် စစ်ကောင်စီကားများ။ ဓာတ်ပုံ- GETTY IMAGES
? စစ်ကောင်စီ ဖမ်းထားသော မိဘ၂ ပါးအရေး နိုင်ငံတကာ ကူညီပေးဖို့ ပရဟိတ ဆရာဝန် တောင်းဆို